Waxbarashada Soomaaliya Xiligii Kacaanka |
Cabdijabaar Sh. Axmed — April 20, 2016
Waxaa jirta ammaan badan oo lagu xusi karo xiligii kacaanka sida baahinta tirada dugsiyada gobollada iyo degmooyinka dalka, marxaladdaan waxaa dalka oo dhan la gaarsiiyey dugsiyada si mar qura gobollada iyo degmooyinka oo idili isula jaan qaadaan oo tacliin mideysan loo helo.
Qoridda afka Soomaaliga, qoridda afka Soomaaligu wuxuu mideeyey Manhajka waxbarashada marxaladaha aasaasiga ee dalka oo dhan. Waxbarashada lacag la’aanta ah, Waxbarashada xilligaas jirtay oo ahayd mid lacag la’aan ah waxay suuragalisay inay waxbarashada u sinnaadaan qaybaha bulshada oo dhan hodan iyo saboolba.
Soomaaliyeynta Manhajka waxbarashada ee marxaladda aasaasiga ah manhajkii waxbarasho oo la soomaaliyeeyey wuxuu sahlay waxyaabo fara badan oo dahsoonaa iyo in la isu soo dhaweeyo kala duwanaanshihii luuqadaha waxbarashada, abuuridda Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed(J.U.S). Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed (J.U.S) waxay soo saartay aqoonyahanno badan oo taqasusyo kala duwan heystay isla mar ahaantaana dalka iyo dadka Soomaaliyeed wax taray.
hadaba dhanka dhaliisha ayaa waxaa ka mid ahaa in tacliinta oo ku soo koobatay gacanta Dawladda, Faafidda Laaluushk, Qaraabaysiga iyo Kooxaysiga oo nidaamka waxbarasho xilliyadii cimriga kacaanka ugu dambaysay ku batay. Fasaadka akhlaaqeed oo ka muuqanayey hay’adaha waxbarashada. dhoofka aqoonyannadu dalka uga hayaameen. Daryeel la’aanta Macallinka Soomaaliyeed, dabbaqidda Nidaamka Waxbarasho ee Markiisamka. Soo saaridda qaraarkii shaqada qaranka ee labada sano taasoo dhalisay in ardaygii maskaxdiisa ka mayranto wixii uu soo bartay.
Waxbarashada Soomaaliya xiligii burburka ama waqti xaadirkan Sida ay u jirtay xilliyadii hore dhaliil iyo ammaan nidaamyadii waxbarasho ee xilligaan ka horreeyey ayuu nidaamka wax barasho ee hadda jira uu leehay dhanka san iyo dhan u baahan in la saxo.
Dhanka Ammaanta Hay’adaha gaarka loo leeyahay oo gacanta ku hayo waxbarashada dalka waxaa ka mid ah tartan wanaagsan oo u dhaxeeya hay’adaha waxbarashada gacanta ku hayo si loo helo waxbarasho tayeysan. Kororka Jaamacadaha ahliga ee dalka, deeqaha waxbarashada dibadda ee ardayda Soomaaliyeed oo aad uga badan xilliyadii hore. Wacyiga diiniga ee ardayda maanta oo aad uga sarreeya kuwii hore.
Dhanka Dhaliisha ayaa waxaa lagu sifeeyn karaa burburka baahsan ee soo gaaray hay’adihii waxbarashada sida wasaaraddii waxbarashada iyo tii tacliinta sare, maqnaanshaha kaalintii xukuumadda ee ku aaddanaa kormeerka hay’adaha waxbarashada, macallimiinta tababaran oo aad u yar, Kala duwanaanshaha dhinaca manaahijta dugsiyada shaqeeya waddaniyadda iyo aqoonta beey’ada Soomaaliyeed oo aad ugu yar ardayda maanta, hadaba si kastaa oo ay dhaliil u lahaato marxalada bur burka ee waxbarashada Soomaaliya aynu u cuskan karnaa murtida oraneysa Ceeyri Ceeymo ma diido.
Tags: Waxbarashada Soomaaliya Xiligii Kacaanka |Tukesomalism.com
Next post Tubman: Haweeneydii Ugu Horeysay Ee Lagu Daabaco Lacagta Dollarka |Tukesomalism.com
Previous post Waxbarashada Soomaaliya Xiligii Xukuumadaha Rayidka |Tukesomalism.com
Cabdulqaadir Maxamed Xasan
January 31, 2018 at 12:50 pm	— Reply
Inta aad xaddaan qoraallada ka soo maaxday maskaxda aqoonyahannada ayaad kala jarjartaan la dibna aad ku sharraxdaan boggiinnaan ma dhalayska ah. Qoraalka aad ku sheegaysaan marxaladihii kala duwanaa ee tacliinta dalka waxaad soo jarjarteen maqaal dheer oo aan ku faafiyey webka Somalitalk cinwaankiisuna ahaa “Sooyaalka Waxbarashada Soomaaliya”. Waxaa idiin wanaagsanaan lahayd inaad dhawrtaan ammaanada Cilmiga oo aad xustaan cidda leh qoraalkaan. Haddii aadan hal abuur lahayn ma reebbana inaad kaashato dadka aqoonta ehelka u ah.